RASMI: Chelsea Oo Ku Dhawaaqday In Ay Dhamaystirtay Heshiiska Xidiga Ree Brazil Ee Alexandre Rodrigues da Silva Iyo Pato Oo Dareenkiisa Ka Hadlay - Wargane News
Home Sports RASMI: Chelsea Oo Ku Dhawaaqday In Ay Dhamaystirtay Heshiiska Xidiga Ree Brazil...
RASMI: Chelsea Oo Ku Dhawaaqday In Ay Dhamaystirtay Heshiiska Xidiga Ree Brazil Ee Alexandre Rodrigues da Silva Iyo Pato Oo Dareenkiisa Ka Hadlay
Kooxda Chelsea ayaa ku dhawaaqday in ay dhamaystirtay saxiixia Alexandre Pato kaas oo ay kula soo wareegtay heshiis lix bilood oo amaah ah isla markaana ay doorasho u haysato in ay heshiiskiisa ka dhigi karto mid rasmi ah marka uu xili ciyaareedkani dhamaado.Alexandre Pato ayaa maalmihii ugu danbeeyay ku sugnaa London halkaas oo uu kaga gudbay tijaabada caafimaadka Blues balse mushaarka uu qaadanayo ayaa muddo hakad galiyay in hore loo dhamaystiro heshisikan.Warka ay Chelsea ku cadaysay saxiixa Pato ayaa lagu daabacay website-ka rasmiga ah ee Blues waxaana qoraalkaas lagu yidhi: “Kooxda kubbada cagta Chelsea waxa ay ku faraxsan tahay in ay ku dhawaaqdo heshiiska amaahda ah ee Alexandre Pato oo ay kala soo wareegtay Corinthians ilaa dhamaadka xili ciyaareedkan”.
Alexandre Rodrigues da Silva ayaa ah xidig weerarka booska uu doonayo ka ciyaari kara isla markaana cajiib ku ah taabashada kubbada, waxaana Pato heshiiska la saxiixay agaasimaha farsamada Chelsea ee Michael Emenalo. Markii uu dhamaystiray heshiiska uu Blues ugu soo biiray ayuu Pato dareenkiisa ka hadlay wuxuuna yidhi: “Anigu aad ayaan ugu faraxsanahay in aan Chelsea u saxiixay, aniga riyay ayay ii tahay, anigu wanaag ayaan ka rajaynayaa in aan la kulmo oo aan barto ciyaartoyda kooxdayda cusub mana sugi karo in aan ciyaaro”.
“Waxaan filayaa in Chelsea taageerada ay isiisay aan anigu awoodi doono in aan bixin doono aaminaad kooxda iyo jamaahiirta” ayuu Pato hadalkiisa raaciyay. Pato ayaa ka soo ciyaaray kooxaha Internacional, AC Milan iyo Corinthians. Pato ayaa kooxda AC Milan ka tagay January 2013 kii kadib markii uu 150 kulan ugu dhaliyay 63 gool wuxuuna dib ugu laabtay dalkiisa Brazil iyo kooxda Corinthians.